अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम, मधेश
० तपाईंको पार्टी के गर्दै छ अहिले ?
— अहिले हामी मेची–महाकाली जागरण अभियानमा छौँ । समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, भाषिक भौगोलिक तथा सांस्कृतिक एकरूपता, समान जनसंख्याको निर्वाचन क्षेत्रको गठन, क्षेत्रीय भाषा–संस्कृतिको संवैधानिक प्रत्याभूतिको जुन उद्घोष थियो त्यसलाई स्वायत्त मधेश प्रदेशको नामले तात्कालीन तमलोपा, सद्भावना, फोरमले विभाजन गरे । २२ बुँदामा टुंगिएको मधेश आन्दोलनलाई ती दलका नेताहरूले बेचे । नबेच्न सकेपछि उनीहरूले महन्थ ठाकुरजीलाई प्रोजेक्ट गरेर पठाइयो । उनले ८ बुँदामा केन्द्रित गरेर मधेश आन्दोलनलाई विर्सजन गरे । यसरी सहादत र सहिदको उद्घोष र आन्दोलनको उद्घोष समग्र मधेशको स्वायत्त प्रदेश थियो । त्यही मुद्दा लिएर मैले फेरी ०६४मा मधेश आन्दोलन उद्घोष गरे । त्यस समयमा पनि आन्दोलन भयो । जसमा महन्थ ठाकुरलाई कांग्रेसबाट पठाइयो । त्यसपछि उनलाई तमलोपा बनाएर ८ बुँदामा विसर्जन गरे । मधेश आन्दोलनलाई र समग्र मधेशलाई २ प्रदेशको वकालत गर्दै मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमीत पारे । हाम्रो अभियानको उद्देश्य नै यही हो कि समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको लागि हामी अहिंसावादी आन्दोलनलाई अगाडी बढाउने र झापादेखि बारासम्मको अभियानमा कार्यकर्तामा उत्साह भेटियो । नयाँ वर्ष लागेसँगै हामीले सशक्त रूपमा यो कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनेछौँ ।
० तपाईंको जुन अभियान छ, यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?
समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेशको स्थापना संविधानको पुनर्लेखनको माध्यमबाट हुनुपर्छ । मधेशी नेताहरूले पुनर्लेखनभन्दा भन्दै चुनावमा गए । उपेन्द्र यादवजी सहिदहरूको सहादतलाई बिर्सेर चुनावमा गए । समग्र मधेशलाई बेचेर थुप्रै महिलाको सिन्दुर पुछियो, कसैको काँख रित्तियो, कसैको आमाबुबाको छाया उजाडियो तर उनीहरूले लाशको व्यापार गरेर ८ जिल्लाको प्रदेश लिएर बसिरहेका छन् । हामी ८ जिल्लाको प्रदेशलाई मान्दैनौँ । आन्दोलनको जुन उद्घोष थियो– समग्र मधेश एक प्रदेश र आत्मनिर्णयको अधिकार तथा त्यसलाई पुनर्लेखन नगरेसम्म मधेशी जनाधिकार फोरम संघर्षरत रहनेछ ।
० चुनाव बहिष्कार गरिसके पछि संघर्ष कसरी गर्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले आन्दोलनको पृष्ठभूमि तयार गर्छौँ । अहिंसात्मक, गान्धीवादीको हिसावले आन्दोलन सुरू गछौँ । गोली बारूद्ध हामी चलाउने होइन । हिंसात्मक काम गर्ने होइन । वैचारिक आन्दोलनलाई मैले हेरे । विराटनगर पुग्दा त्यहाँका कार्यकर्ताहरूमा धेरै उत्साह देखियो । राजविराज, जनकपुर, महोत्तरी, सप्तरी चारैतिर यो उत्साह देखियो र आम जनताको बीचमा हामी कार्यकर्तालाई लिएर संघर्ष गर्नेछौँ ।
० तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रादेशिक सरकार गठनको तयारी भइरहेका बेला तपाईहरूको यो अभियान सार्थक हुन्छ त ?
— हामीले समग्र मधेशको लागि गरेको हो, त्यसैले यो अभियान सार्थक नै हुन्छ । राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले मधेशी एकताको कुरा गर्छ तर समग्र मधेश एक प्रदेशलाई तोडेर मधेशको एकता सम्भव हुँदैन । अब उनीहरू ८ जिल्लाको एक प्रदेश लिएर बसेका छन् । उनीहरूको खाने, कमाउने उपलब्धी हो, त्यो प्राप्त गरिसकेका छन् । तर हाम्रो आन्दोलन धेरै नै सार्थक हुन्छ । कार्यकर्ताहरूमा जुन उत्साह र आम जनतासँगको सम्पर्क भएको छ, त्यसकारण झापादेखि सर्लाहीसम्म त सार्थक नै भयो र बाँकी ठाउँहरूमा पनि हाम्रो यो अभियानले निकै ठूलो उपलब्धी हासिल गर्नेछ ।
० समग्र मधेशलाई राजपा र फोरमले ८ जिल्लामा खुम्च्यिाइदियो भन्नु भयो तर उनीहरूले त हाम्रो मधेशको मुद्दा सकिएकै छैन भन्दै आएका छन् त ?
— मुद्दा त बाँकी नै छ । हरेक १० वर्षमा वार्ता गर्ने, समग्र मधेशलाई २ प्रदेशमा र दुई प्रदेश छाडेर अब एक प्रदेशमा जाने यस्तो नैतिकहीन, चरित्रहीन, हात्तीको जस्तो देखाउने दाँत एउटा र अर्को खाने जस्तो छेपारे प्रवृत्ति देखाउने त्यस्ता व्यक्तिहरूको चरित्र चित्रण हामीले गर्नु पर्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूको चरित्र त आम जनताले नै विश्लेषण गर्दछ ।
० यसपटकको निर्वाचनमा राजपा र फोरमले पाएको मतलाई कुन रूपमा हेर्नुहुन्छ ?
— यो त विवशता र लाचारीपन मधेशीको भएर नै हो । बाध्य भएर यो छद्मभेषी दोहोरो चरित्र भएता पनि मधेशी भएर अनुहार हेरेर आम जनताले भोट दिएको हो । जनताले लाचारीवश भोट दिएको हो । उनीहरूको उपकार होस् भनेर दिएको होइन ।
० निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब मधेशको राजनीति कता तिर जान्छ ?
— निर्वाचन सम्पन्न भए पनि स्थानीय तहको अहिलेसम्म कुनै प्रबन्ध हुन सकेको छैन । प्रादेशिक सरकारको कर्मचारीदेखि लिएर सचिवालयसम्मको केही व्यवस्था हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सरकार पनि कमजोर रहेको छ । सरकारले पनि भन्न थालेको छ कि प्रदेशले आफ्नो खर्च आफै धान्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा वडा सदस्यहरूलाई मोबाइल फोन देखि मेयरलाई मोटरसाइकल दिने कुरा गर्दा विकास हो कि विनाश हो । त्यसकारण जबसम्म संविधान पुनर्लेखन हुँदैन तबसम्म यो संविधान लागू हुँदैन ।
० अब बन्न लागेको प्रादेशिक सरकार निर्माणलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ ?
— प्रादेशिक सरकारका हरेक जिल्लामा विरोधका लहरहरू छन् । जुन पार्टी केन्द्रमा जितेको छ उसकै कार्यकर्ता राजधानीका लागि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । संविधान आउने बित्तिकै खसवादी नेपाली विद्हरूले पनि भनेका छन् कि यो संविधान गलत छ, यो संविधान औचित्यहीन छ भनेर पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ । ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान राजपा र संघीय फोरमले स्वीकार गरिसके पछि सदनमा त १०० प्रतिशतले नै बनाएको जस्तो भइहाल्यो । तर पनि यो संविधानले उभो लाग्न सकेको छैन । व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । यो संविधानमा त विकट नै विकट र संकट नै संकट छ । त्यसकारण पुनर्लेखन नै एकमात्र राजनीति निकास हो ।
० राजपा र फोरमको कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
— कार्यशैली हेर्दा त अहिले पनि उनीहरूबीच हानथाप नै छ । एउटा दक्षिणपन्थी छ भने अर्को उत्तरपन्थी छ । उनीहरूबीच तालेमेल होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० अन्य पार्टीहरूको क्रियाकलाप कस्तो लाग्छ ?
— पार्टीहरूको क्रियाकलाप त भ्रमित थियो । जसरी मधेशमा अहिले नेपाली कांँग्रसलाई कुचो लगाएर फालिसके त्यसरी नै अरू दललाई पनि मधेशी जनताले फाल्नेछन् । ससंदमा नै उनीहरूको तालमेल बन्छ भन्ने विश्वसनियता छैन ।
० तपाईंहरू आफ्नो आन्दोलनको प्रचार कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
— हरेक जिल्लामा अभियानको रूपमा जाने, आमसभा गर्ने, जनसम्पर्क गर्ने, सन्देशहरू सबै ठाउँमा पु¥याउने, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि जनतालाई अवगत गराउने र जनभावना बुझेर दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरू गर्ने हो ।
० अबका दिन मधेश कसरी अगाडी बढ्नुपर्छ ?
— अहिलेसम्म त मधेश एक प्रदेशमा नै चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै चल्नुपर्छ । इमान्दार भएर चल्ने हो भने संविधान पनि परिमार्जन हुन्छ, नभए मधेशमा जसरी कांग्रेस बढारियो त्यसरी नै अरू पार्टी पनि नबढारिएला भन्न सकिदैन ।
० राजपा र फोरमले मधेशको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्छ ?
— मधेशका मागहरू राजपा र फोरमले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यदी मधेशको माग सम्बोधन गर्नु नै थियो भने त पहिले नै उनीहरू सरकारमा भएको बेलामा नै गराउँथे नि ।
० विगतमा नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावलाई विरोध गरेको थियो तर अहिले संशोधन गर्छु भन्दै छ, के एमालेले मधेशले चाहे बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सक्छ ?
— उसको चाहना के छ ? मधेशको त समग्र मधेश स्वायत्त प्रदेश आत्मनिर्णयको अधिकारपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि भएको हो । मधेशको चाहना बमोजिम गरेको भए बढारिएर जानुपर्ने थिएन नि । त्यसैले पनि मधेशको चाहना बमोजिम नै गर्नुपर्छ ।
० मधेशका अधिकांश भू–भाग भारतको सिमानासँग जोडिएको छ, यस अर्थमा पनि अब बन्ने प्रादेशिक सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो राख्नुपर्ला ?
— प्रदेश सरकारले मात्र होइन नेपालको केन्द्रीय सरकारले नै भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । भारतसँग त हाम्रो परापूर्वकालदेखि नै सम्बन्ध जोडिएको छ । तर भारतले पनि मधेशको राजनीतिलाई सकरात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । मधेशको स्वायत्ततामाथिको दृष्टिकोण सकरात्मक हुनु पर्दछ । भारत आफूमा लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुक हो भने नेपालको लोकतन्त्रमा मधेशको स्वायत्ततालाई पनि समेट्न जोड दिनुपर्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल फागुन ४ गते शुक्रबार ।